Douglas Nyikayaramba Archives - Zimbabwe Voice
Nyikayaramba’s widow demands answers from God
THE widow of the late Douglas Nyikayaramba Saturday sobbed uncontrollably as her husband’s casket was being lowered into the grave at the National Heroes Acre in Harare. Nyikayaramba, Zimbabwe’s Ambassador to Mozambique, died early last week after succumbing to Covid-19 and was declared a national hero. However, the late retired army general’s wife Elina could not hold back her grief…
Lockdown review: ED speaks
PRESIDENT Emmerson Mnangagwa yesterday said his impending review of the tough lockdown to slow down Covid-19 infections will be influenced by the situation on the ground. Mnangagwa is expected to announce new lockdown measures this week as restrictions imposed a fortnight ago expire tomorrow. He told mourners at the burial of the late Retired Lieutenant-General Douglas Nyikayaramba at the National…
Nyikayaramba declared national hero
THE late Zimbabwean Ambassador to Mozambique, Lieutenant General (Retired) Douglas Nyikayaramba has been declared a national hero. Nyikayaramba died of COVID-19 related complications this Tuesday at St. Anne’s Hospital in Avondale, Harare, while he was back home for vacation. He was 60. The Minister of Defence and War Veterans Affairs, Oppah Muchinguri-Kashiri made the announcement when she visited the Nyikayaramba…